ဟဒီးဆ်: ငါကိုယ်တော်၏ နောက်တွင် ငါကိုယ်တော်သည် အမျိုးသားတို့အပေါ် အမျိုးသမီးတို့ထက်ပိုပြီး အန္တရာယ်ကြီးသည့် ဖိသ်နဟ်ကို ချန်မထားခဲ့ပါ။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ငါကိုယ်တော်၏ နောက်တွင် ငါကိုယ်တော်သည် အမျိုးသားတို့အပေါ် အမျိုးသမီးတို့ထက်ပိုပြီး အန္တရာယ်ကြီးသည့် ဖိသ်နဟ်ကို ချန်မထားခဲ့ပါ။
အမျိုးအစား: ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . နှလုံးသားကို နူးညံ့စေသော ဆုံးမဩဝါဒများ။ . စိတ်အလိုရမ္မက်များကို ရှုံ့ချခြင်း။ .
အုစာမဟ်ဗင်န်ဇိုက်ဒ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်တော်မူသည်။ ငါကိုယ်တော်၏ နောက်တွင် ငါကိုယ်တော်သည် အမျိုးသားတို့အပေါ် အမျိုးသမီးတို့ထက် ပိုပြီး အန္တရာယ်ကြီးသည့် ဖိသ်နဟ်ကို ချန်မထားခဲ့ပါ။
တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ အမျိုးသမီးများသည် ဖိသ်နဟ် ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်လာရန်အတွက် ကြီးမားသည့် အကြောင်းခံဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အပြင်သို့ထွက်၍ အမျိုးသားများနှင့် ရောနှောသည့်အခါ သူမတို့၏ ဖြားယောင်းမှုနှင့် လမ်းလွဲမှုထဲသို့ ကျရောက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူမတို့နှင့် သီးခြားလွတ်လပ်စွာနေသည့်အခါ သာသနာရေးနှင့်လောကီရေး နှစ်ခုစလုံးကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အမျိုးသမီးတို့၏ “ဖိသ်နဟ်” ပြဿနာသည် အမျိုးသားတို့အပေါ်တွင် အခြားအရာများထက် ပို၍အန္တရာယ်ကြီးမားသည်။
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . နှလုံးသားကို နူးညံ့စေသော ဆုံးမဩဝါဒများ။ . စိတ်အလိုရမ္မက်များကို ရှုံ့ချခြင်း။ .